Frida Kahlo: sary hoso-doko an'ny hetsika feminista | Famoronana an-tserasera
Frida Kahlo: sary hoso-doko amin'ny hetsika feminista
Na dia mbola tsy tazana vao tsy ela akory aza izy ireo, ny tantaran'ny zavakanto dia feno vehivavy lehibe izay tsy maintsy niady tamin'ny fiarahamonina anjakan'ny lehilahy mba hahatonga azy ireo ho mpanakanto. Nomarihin'izy ireo teo aloha sy teo aoriany ny tantaran'ny zavakanto sy ny fahitana ara-tsosialy ny fitoviana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Raha misy mpanao hosodoko malaza amin'ny tantaran'ny taonjato faha-XNUMX dia tsy isalasalana fa Frida Kahlo (1907-1954). Teraka tany Mexico, izy dia raisina ho iray amin'ireo sary famantarana lehibe indrindra amin'ny zavakanto meksikana. Handinika zavatra mahaliana momba ny fiainany isika.
1 Ny fanoloran-tenany ho amin'ny sary hosodoko dia voamarika tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona iray
2 Ny hosodoko, tandindon'ny vehivavy
3 Nanjary angano izany taorian'ny nisehoany tamin'ny sary miloko voalohany
4 Tsy nihevitra azy hanao asa tena izy izy
5 Namorona varotra maro be ho an'ny tenany izy
Ny fanoloran-tenany ho amin'ny sary hosodoko dia voamarika tamin'ny lozam-pifamoivoizana nahafaty olona iray
Voan'ny lefakozatra izy tamin'ny fahazazany, ka nahatonga ny ranjo iray ho manify kokoa noho ilay iray hafa. Noho io antony io dia nanokana ny fotoanany malalaka tamin'ny fahazazany izy tamin'ny fanatanjahan-tena, hanandrana hanatsara ny toe-pahasalamany. Taty aoriana, raha nianatra tany amin'ny lise izy mba ho tonga dokotera, dia nandany ora maro tamin'ny atrikasa fanaovana sokitra sy fanontana, an'ny naman'ny rainy. Tao no nahitana fa nanana talenta manokana tamin'ny kanto izy, rehefa nanao dika mitovy tamin'ny sokitra tonga tany amin'ilay atrikasa. Ny fanolorany tena lehibe indrindra tamin'ny fandokoana dia taorian'ny lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona nanamarika ny fiainany: ny bisy nandehanany dia voahitsakin'ny kamiao iray, namela ny vatany tena simba tamin'ny faritra maro. Noho io antony io dia nandany ampahany betsaka tamin'ny fiainany teo am-pandriana izy ary tsy maintsy nandalo fandidiana 32 teo ho eo. Niatrika fotoana lava be nefa tsy afaka nihetsika, dia nanokana ny tenany tanteraka tamin'ny fandokoana izy.
Ny hosodoko, tandindon'ny vehivavy
Raha misy zavatra ao amin'ny hosodokon'i Frida dia fahatsapana lehibe izany, taratry ny fijaliana lalina nolalovany. Ny sary hosodoko dia tantaram-piainany ara-bakiteny, manasongadina ny habibiana, alahelo ary zava-misy. Ao amin'ny ankamaroan'izy ireo dia mandoko ny tenany izy, miaraka amin'ny akanjo mahazatra teratany Meksikana. Izy io dia heverina ho tandindon'ny vehivavy, satria hitantsika amin'ny saripika Frida miharihary ary manao izay tiany, zavatra tsy fahita firy amin'ny vehivavy tamin'izany fotoana izany. Hita taratra amin'ny herisetra eo amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny sary hosodoko maro koa izany, ary fitarainana izany. Ho fanampin'izany, mamorona marika manokana izy amin'ny fandavana tsy hongotana ny volomaso sy ny volombava, ary koa ny fisotro labiera.
Nanjary angano izany taorian'ny nisehoany tamin'ny sary miloko voalohany
Frida dia nalain'i Photographer Hongroà Nickolas Muray, iray amin'ireo voalohany nampahafantatra an'i Amerika ny sary miloko. Ny fisehoany ara-batana miavaka sy ny akanjo miloko ary ny vakana, miaraka amin'ireo sanganasa lehibe nataony, dia nahatonga an'i Frida ho kisary, mariky ny kolontsaina Meksikana.
Tsy nihevitra azy hanao asa tena izy izy
Ny Surrealism dia taratry ny nofy izay lasa tena izy ary afaka amin'ny fiarahana mahatsiaro tena (manana an'i Dalí isika ho ohatra tsara indrindra). Ny Expressionism dia miavaka indrindra amin'ny fanehoan-kevitra lehibe amin'ny sary hosodoko (toy ireo nataon'i Van Gogh izay hitantsika tao ity lahatsoratra teo aloha ity). Ny sary hosodoko nataon'i Frida Kahlo dia heverina ho tsy misy fotony miaraka amin'ny fomba fanehoan-kevitra. Asa feno fanoharana sy singa tantaram-bahoaka ary zavakanto malaza avy any amin'ny fireneny (singa misy loko marevaka be ireo), ary koa ny sarin'ny tena. Mampiseho sary mahafinaritra maro mifangaro amin'ny fahasimbana niaretan'ny vatany taorian'ny loza, izay mampahafantatra antsika ny fihetseham-pon'ny mpanakanto rehefa mahita ny tenany izy, rehefa mampifandray ireo sary tsy azo antoka ireo. Na dia izy aza no nilaza fa tsy zava-misy ny asany, fa kosa nampiseho ny zava-misy masiaka.
Namorona varotra maro be ho an'ny tenany izy
Vitsy ny mpanakanto namokatra vokatra ara-barotra betsaka toa an'i Frida Kahlo. Ny karazan-vokatra rehetra ho an'ny trano sy ny kojakoja, ny fitafiana ary ny maro sns. Ary i Frida dia mbola manohy ny maha-izy azy amin'ny tolona vehivavy ankehitriny.
Frida dia lasa modely mahery amin'ny hery ho an'izay nandia fotoan-tsarotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Frida Kahlo: sary hoso-doko amin'ny hetsika feminista
Zavatra tsy fantatrao momba ilay mpanao sary hosodoko espaniola lehibe Pablo Picasso